Catzz Sariirta Bisadda - Joornaalka Naqshadeynta
Jimco 26 Bisha Kow Iyo Tobnaad 2021
Sariirta Bisadda Markii la sameynayay sariirta bisadda Catzz, dhiirrigelinta waxaa laga soo qaatay baahiyaha bisadaha iyo milkiilayaasha si isku mid ah, waxayna u baahan yihiin in la mideeyo shaqada, fudeydka iyo quruxda. Intii ay fiirinayeen bisadaha, astaamahooda joomatariyeed ee gaarka ah ayaa dhiirrigeliyay qaabka nadiifka ah ee la aqoonsan karo. Qaar ka mid ah qaababka dabeecadeed ee dabeecadeed (sida dhaqdhaqaaqa dhegta) ayaa lagu dhex daray waayo-aragnimada isticmaale ee bisadda. Sidoo kale, iyadoo maskaxda lagu hayo milkiileyaasha, ujeedku wuxuu ahaa in la abuuro qayb ka mid ah alaab guri oo ay astaysto oo ay ku faanaan. Intaa waxaa dheer, waxay ahayd muhiim in la hubiyo dayactirka fudud. Kuwaas oo dhammaantood jilicsan, naqshad joomatariyeed iyo qaab dhismeed qaabaysan oo awood u leh.
Magaca mashruuca : Catzz, Magaca naqshadeeyayaasha : Mirko Vujicic, Magaca macmiilka : Mirko Vujicic.
Naqshadeeyayaasha ugu wanaagsan adduunka, farshaxanada iyo qaabeeyeyaasha.
Arbaco 24 Bisha Kow Iyo Tobnaad 2021
Naqshadaynta wanaagsan waxay mudan tahay aqoonsi weyn. Maalin kasta, waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno naqshadeeyayaal la yaab leh oo abuuraya naqshado asal ah iyo kuwa hal-abuurnimo ah, qaab dhismeedka cajiibka ah, moodada qurxinta iyo sawirada hal abuurka leh. Maanta, waxaan kuu soo bandhigaynaa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha adduunka ugu weyn. Hubi eegis naqshad naqshadeeye abaalmarin maanta hel helitaanka naqshadaada maalinlaha ah.
Alaabada xayawaannada iyo alaabada loogu talagalay qaabeynta xayawaanka
inci Ceramik Khamiis 2 Bisha Laba Iyo Tobnaad
Prisma Qalabka Curyaameysan Ee La Qaadi Karo Ee Ultrasonic Arbaco 1 Bisha Laba Iyo Tobnaad
Baan Armaajo Qado Loo Sameeyay Talaado 30 Bisha Kow Iyo Tobnaad
Bisha Laba Iyo Tobnaad 2021 (93)
Bisha Kow Iyo Tobnaad 2021 (90)
Bisha Tobnaad 2021 (93)
Naqshadeynta wareysiga ee maalinta Khamiis 2 Bisha Laba Iyo Tobnaad
Naqshadeynta naqshadda maalinta Arbaco 1 Bisha Laba Iyo Tobnaad
Naqshadeynta maalinta Talaado 30 Bisha Kow Iyo Tobnaad
Naqshadeeyaha maalinta Isniin 29 Bisha Kow Iyo Tobnaad
Naqshadeynta kooxda maalinta Axad 28 Bisha Kow Iyo Tobnaad
Sariirta Bisadda Mirko Vujicic Catzz